Waldaa Qulqullootaa, Wiirtuun Adaamaa Manneen Amantaa misoomaan akka of danda’aniif carraaquun akka barbaachisu ibse!
Godina Shawaa Bahaa magaalaa Adaamaatti Waldaan Qulqullootaa Wiirtuu Adaamaa Onkololeessa guyyaa 06, 2009 A.L.I tti oduu gadaamotaa qopheessuu irratti mari’ateera. Walgahiin marii kanaa ganama sa’aatii 3:30 irraa kaasee hanga 5:30 ti kan ture yoo ta’u, jalqaba irratti seensa marichaafi kallattii marichaaf kan ta’u barumsi wangeelaa mata duree “kan isiniif kenname jabeessaa eeggadhaa”jedhuun kennameera. Barsiisaa Geetaachoon lallaba kana keessatti kan nuuf kennamteefi bara baraaf qabeenya keenya taatee jiraattus mana amantaa ta’uu ishee ibsaniiru.
Hirmaattota Waltajjichaa Muraasa
Haaluma kanaan sagantaa ciree booda immoo Piroopoosaalli saganticha qopheessuuf qophaa’e Walitti qabaa Waldaa qulqullootaa Wiirtuu Adaamaa kan ta’e barsiisaa Geetinat Asiraatiin dhiyaateera. Kaayyoon sagantaa kanaatis gadaamonni godina Shawaa Bahaa keessa jiran hundi isaanii misoomaan akka of danda’an, Wiirtulee leenjii lubootaa haaraa hundeessuufi tajaajiltoota Afaan Oromootiin tajaajiluu danda’an horachuuf akka ta’es ibsameera. Kaayyoo kana galmaan gahuuf Abbootii mana amantaa kan ta’an luboonni, manneen barnoota Dilbataa,waldaaleen hafuuraawaa adda addaafi maanguddoonni nannawaa illee dammaqinaan akka itti hirmaachuu qaban waamichi taasifameera.
Dhuma irratti hirmaattotni marii kanaasagantaa qophaa’e irratti yaada erga kennanii booda karoora kana galmaan gahuuf carraaqqichi koree miseensota shan qabuun akka durfamu, waltajjiin kunis ji’a ji’aan akka gaggeeffamu murteessuun sagantichi xumurameera.